Muqdisho & magaalooyin kale oo Somalia ah ayaa kulayl lala joogi la’yahay (Bal si cilmi ah u ogow sababta) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Muqdisho & magaalooyin kale oo Somalia ah ayaa kulayl lala joogi la’yahay...
(Muqdisho) 18 Sebt 2021 – Dad badan ayaa ka cabanaya kulaylka jira iyagoo leh ”ma Maarso ayaa noo dhuumatay waa see lamaba gaarine?”
haddii aan ka jawaabo, qorraxdu laba jeer ayay sanadkii dhul-baraha dul taagan tahay, waa Maarso 21 iyo Sebtember 22-keeda.
Waxaa loo yaqaanaa Equinoxes oo Soomaali ahaan noqoneysa Caano maalo isla eg, yacni habeen iyo maalin isla eg, 12 saac habeen ah iyo 12 saac maalin ah.
Waana xiliyada Guga iyo Dayrta, sida qoraalku u kala horreeyo. Sidaa darteed qorraxdu haatan falagga dhul-baraha ayay dul taagan tahay oo ku beegan tahay, wadamadda dhulbaraha kulaala wa xilliga eey ugu kuluyihiin misana roobbanyihiin.
Taasaa kuleylka noogu wacan.
Waxaa Diyaariyey: Cabdinuur Caanogeel
Previous articleNin Soomaali ah oo lagu qabtay lacag aad u fara badan oo uu la dhoofayey (Magaciisa & dembiyo kale oo loo haysto)
Next articleISKA JIR! Xisbi keenay hindise ah in iqaamadda laga ceshado qofkii booqda dalkii uu kasoo qaxay (Dhegeyso)